हावाहुरी र वर्षाको सम्भावना देशका कुन–कुन क्षेत्रमा ? – bampijhyala.com
Home > समाचार > हावाहुरी र वर्षाको सम्भावना देशका कुन–कुन क्षेत्रमा ?
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । प्रि–मनसुनी गतिविधिका कारण देशका विभिन्न स्थानको मौसम बदली भइ केही स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम विदले बताएका छन् । मौसमविदका अनुसार प्रि–मनसुनी गतिविधि सुरु भएकाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा अकश्मात बादल विकास भइ हावाहुरीसहित पानी पर्ने हुन्छ ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । हाल देशका केही पहाडी भू–भागहरूमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहेको छ भने बाँकी भू(भागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ।
शनिबार दिउँसो प्रदेश १, बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने छ। प्रदेश १, बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू–भागहरुको एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
यस्तै राति प्रदेश १, बागमती प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रहने छ । बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने छ।
प्रदेश १, बागमती प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू–भागको एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टिकट काउण्टर सञ्चालन गर्नका लागि नयाँ बसपार्कका टिकट काउण्टर बुधबारदेखि बन्द हुने २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०७:०९
विद्यालय बन्द गर्ने-नगर्नेबारे आज छलफल हुँदैं २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०७:०९
कोटेश्वरदेखि जडीबुटीसम्मको सडक निर्माण छिट्टै सकिने २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०७:०९
बालबालिकामा संक्रमण बढ्दै : दुई सातामा २७१ संक्रमित २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०७:०९
सदस्यताको विवरण बुझाउने म्याद पुन थप्दै कांग्रेस २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०७:०९